Famolavolana tranonkala: mamaly sa mampifanaraka? Inona no mahasamihafa azy? | Famoronana an-tserasera
Ny iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny famolavolana pejin-tranonkala dia ny miantoka ny fahazoana miditra sy azo ampiasaina tsara ho an'ireo mpampiasa anay. Ity dia singa lehibe iray lehibe tokoa satria izy io dia hamaritra zavatra manan-danja toy ny fidiran'ny mpitsidika sy izay manan-danja kokoa amin'ny tanjaka ampiasain'ny mpitsidika miaraka amin'ny tranokalanay na ny tsy fivadihan'izy ireo. Ilaina ny hijerentsika ny panorama misy ankehitriny: ny karazana pejy misy, ny karazan'ireo mpampiasa misy ary ny karazana fidirana ary ny fomba fitetezana izay misy. Misy karazany maro ny làlan'ny fidirana amin'ny Internet: solosaina, takelaka, finday avo lenta ... Ka ny pejy izay volavolainay dia tokony ho vonona tanteraka hamerina amin'ny iray amin'ireo fitaovana ireo.
Be ny resaka famolavolana adaptive and of famolavolana mamaly. Saingy mitovy daholo ve ireo hevitra ireo? Tsy tena izy, misy ny tsy fitovizan'ny hevitra roa ary ilaina ny fahalalantsika azy ireo ary misafidy izay safidy mety indrindra amintsika amin'ny tranga tsirairay.
Satria misy karazana fitaovana sy vahaolana amin'ny efijery, ilaina ny fahafahantsika mamorona tranonkala azo averina amin'ny endriny rehetra. Zava-misy fa misy isan-jato mihabe isan-jato miditra amin'ny tambajotra amin'ny alàlan'ny fitaovana fitondra mandehandeha, na dia mifanohitra amin'izay aza ny orinasa maro no tsy miraharaha an'io antsipirihany io ka ny zavatra niainan'ireo mpampiasa ireo rehefa mitsidika ny pejiny izy ireo dia ambany kalitao indrindra ary noho izany dia mandao ilay pejy izy ireo ary mahazo fiheverana ratsy ny orinasa resahina. Misy ny olana toy ny fotoana famoahana lava be loatra rehefa manandrana mamoaka pejy amin'ny birao amin'ny finday, olana rehefa manao sintoka ary mazava ho azy amin'ny ambaratonga hita maso miaraka amin'ny fanovana na fanodikodinana ny endrika tany am-boalohany. Mba hisorohana ireo olana ireo dia tena ilaina ny manamarina ny fivoaran'ny fampahalalana an-tserasera sy manandrana mampifanaraka ny modus operandi vaovao satria raha tsy izany dia fanemorana sy fahaverezan'ny mpitsidika fotsiny izany.
Ny safidy hafa misy ankehitriny hiatrehana io fanamby io dia ny maodelin'ny famolavolana mamaly sy ny endrika mampifanaraka. Samy misy rafitra fandefasana programa somary miovaova izay manome ny fahafaha-mandamina na mandamina indray ireo singa mandrafitra ny rafitry ny tranokalanay mba hahafahan'izy ireo mizatra amin'ny vahaolana amin'ny efijery ary manome valiny mahasarika sy miasa. Na izany aza, tsy mitovy ny fomba maodely roa tonta.
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny famolavolana mamaly sy ny endrika mampifanaraka?
Famolavolana tranonkala mamaly ny zavatra ataony dia ny mampifanaraka ny firafitry ny tranonkala sy ireo singa rehetra mamorona azy amin'ny efijeran'ny fitaovantsika hanomezana endrika ivelany hita maso sy fampiasa tsara arakaraka ny masonkarena toy ny fidirana amin'ny atiny. Mba hahatratrarana an'io karazana endrika io dia ilaina ny mametraka soatoavin'ny habe mifanaraka aminy fa tsy mametraka soatoavina raikitra. Ny fangatahana haino aman-jery sy ny takelaka fanaingoana dia ampiasaina hahazoana vokatra tsara. Amin'ny tranga maro dia ilaina ny manova ny rafitra tany am-boalohany mba hanasoavana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fanovana ny fisehon'ny menus, ohatra ary ny fisorohana ireo horonana tafahoatra na fomba fidirana tsy mahazo aina avy amin'ny fitaovana hafa.
Famolavolana tranonkala adaptive tsy malefaka toa ny famolavolana mamaly. Mampiasa haben'ny efijery efa voafaritra sy efa voafaritra mialoha ho an'ny fitaovana tsirairay izay hanomezana ilay pejy resahina. Ny iray amin'ireo hatsarany izay azontsika lazaina dia ny fahatsorany amin'ny haavon'ny kaody. Ny famoronana endrika amboarina dia tsy mila kaody betsaka toy ny endrika mamaly.
Noho izany rehetra izany, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny misafidy famolavolana tranonkala mamaly ary na dia mety mitaky fotoana fanampiny aza izany amin'ny fivoarany, dia mendrika ihany izany, izany rehetra izany raha toa ka isika no hikarakara ny integral. fampandrosoana ny tranokalanay. Raha miasa amin'ny alàlan'ny modely miaraka amin'ny CMS toy ny WordPress isika dia tsy maintsy mahazo antoka fa mamaly ny maodelintsika (ny tolo-kevitra farany indrindra, noho izany mora ny mahita azy ireo), amin'ity fomba ity dia tsy ilaina ny miasa ao aminy . Tsy fironana vaovao io, tadidio fa efa niditra an-tsokosoko ao anaty rafitra multiplatform efa an-taonany maro isika, na dia zavatra tsy tadidin'ny orinasa maro aza izany, zava-dehibe satria miovaova be ny kalitao sy ny isan'ny mpanjifa. .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Famolavolana tranonkala: mamaly sa mampifanaraka? Inona no mahasamihafa azy?
diego lucero dia hoy izy:
Raha ny fahazoako ny hevitra roa dia mitovy, tsy misy dikanteny ara-bakiteny hoe inona no dikan'ny wav amin'ny famolavolana tranonkala tadiavina izay tadiaviny. Ity teknika ity amin'ny teny Espaniôla dia adika amin'ny famolavolana tranonkala adaptive. , famolavolana tranonkala mihetsika no lazain'ity fanamarihana ity, manamafy ny famolavolana tranonkala adaptive. Aza afangaro ny mpamaky ny famolavolana tranokala adaptatera ary ny famolavolana tranonkala mamaly dia mitovy hevitra ihany
Mamaly an'i diego lucero
Ny hakanton'ny hazo manaitra ao amin'ny sary infrared an'i Przemysalw Kruk